October | 2012 | Ahkeno's Blog
Good Drupal Modules
October 18, 2012 October 18, 2012 ~ ahkeno	~ 1 Comment
Hi visitors! Sorry for didnt update any #mozilla #personal #photography #CMS on my blog.I’ve been work on druapl project and busy with my projects (mostly I’ve been research and discuss with my client ) .I found many of my blog visitor came across from the world and read my blog (mostly on this and this ). Thank for reading my personal digest though and I will write more! These days I had been discover many of secret of life and work.Today let me share work (drupal) first 🙂
Here are good links for Drupal modules!
The book of (good) Modules http://www.shooflydesign.org/files/DCLA2012_BajillionModules.pdf
This one isalittle bit old blog post but some of these modules are we need in our #drupal projects.
Hope you all enjoy and Haveagreat weekend !
How to add file at Drupal 7
October 11, 2012 October 12, 2012 ~ ahkeno	~ Leaveacomment
Tutorial Post လေးတွေ မရေးတာ ကြာနေပြီဆိုတော့ အခုလက်တလော အကီနို Drupal project တခုရေးရင်းနဲ့ရှာတွေထားတဲ့
ရိုးရှင်းတဲ့ How to add file at Drupal7ဆိုတဲ့ Tutorial လေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူ ရဲ့ စက်ထဲမှာ (သို့) လက်တလော စမ်းသပ်ထားတဲ့ Drupal project လေးရှိမယ်လို့မှတ်ယူထားလိုက်ပါမယ်။
ယနေ့ ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ ပါတဲ့ ကိုယ်ရှဲချင်တဲ့ မျှဝေချင်တဲ့ download link လေးကို ကိုယ့် Drupal ဆိုဒ်ကလေးကနေတင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Drupal မှာ အသင့်ပါပြီးသား File module လေးကို On လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ Content မှာတင်နိုင်ဖို့ Field တခုဆောက်ပါမယ်။အကီနိုက တော့ Blog ဆိုတဲ့ Content ကလေးမှာ ထည့်ချင်တာကြောင့် Structure>Content Type> Blog ကိုရွေးပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ Field အသစ်ထပ်ထည့်ချင်တာမို့ Manage fields ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ လိုအပ်တာလေးတွေကိုဖြည့်ပါ ။
Allowed File extension မှာ ကိုယ်တင်မဲ့ File အမျိုးအစားတွေကိုဖြည့်ပါ။ File directory မှာတော့ သီးသန့် Folder လေးဆောက်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ ဖိုဒါလေးကိုတော့ sites/default/files/my-download-files မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်
အားလုံးတည်ဆောက်ပြီးသွားရင် Content အသစ်ထည့်ကြည့်ပါ။